BangEa - ပရိုဂရမ်မာကုန်သွယ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
EA ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Panel ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။
ဖွင့်လှစ်ခြင်း Panel ကို
အချိန်သတ်မှတ်ထားသော စျေးကွက်နှင့် အမှာစာ
စျေးကွက် & ဆိုင်းငံ့အမိန့်
ပိတ်ခြင်း panel လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
အပြုသဘောဆောင်သော Add Space
site EA ဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးကို အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
EA သည် ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အလိုအလျောက် ကုန်သွယ်မှုစနစ်၏ အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 15, 2022
K-line angle ၏ အလိုအလျောက် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုကို အပြည့်အဝသဘောပေါက်ပါ။
ဤသည်မှာ EA BANG ဖိုရမ်တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးမှ မေးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့၊ ရှိပြီးသား EA က ဒါကို သဘောပေါက်နိုင်လို့ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ထားဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ k line ၏ slope သည် အဘယ်နည်း။ ၎င်းသည် N ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ […]
ပရိုဂရမ်မာတစ်ရောင်းဝယ်ရေး EA နှင့် script အကြားကွာခြားချက်
EA- စျေးနှုန်းအတက်အကျရှိတိုင်း၊ EA ရှိကုဒ်ကို တစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်သည်။ Script- ဇာတ်ညွှန်းလည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ကုဒ်ကို တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ခြားနားချက်ကို မှန်ကန်စွာ နားလည်နိုင်စေရန်အတွက်၊ EA Bang မှ Mr. Tang သည် EA နှင့် သရုပ်ပြရန်အတွက် ဇာတ်ညွှန်းကို အထူးရေးသားခဲ့ပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အချိန်ကို ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ […]
ကုန်သွယ်မှုဆာဗာ၏ IP လိပ်စာကို ရယူပါ။
၎င်းသည် ယခင်က EA State ဖိုရမ်တွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးမှ တောင်းဆိုသည့် လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်မာတစ် EA ကို မကြာခဏ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် အသုံးပြုနေပြီး ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာသည် မှာယူမှုပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ငွေပေးငွေယူ မြန်နှုန်းသည် မကြာခဏ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့် မဟာဗျူဟာအပေါ် ကြီးမားသော သြဇာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိပါသည်။ သူသည် အများအားဖြင့် VPS ကိုအသုံးပြုသည် […]
EA တစ်ခုသည် အခြား EA ၏ အမှာစာများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် သင်သည် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပရိုဂရမ်မာတစ်ကုန်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ဖူးပါသလား။ aEA ၏အဖွင့်အနေအထားကပိုကောင်းသည်၊ bEA ၏အပိတ်အနေအထားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ဤ EA နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်နိုင်လျှင် ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည် ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 1 EA ကိုအသုံးပြု၍ ရာထူးများကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်။ ကိုင်တွယ်ချင်ရင် […]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2022
ပရိုဂရမ်မာတစ်ကုန်သွယ်မှု၏ parameter configuration ဖိုင်နှင့်ပတ်သက်၍၊ ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်လုံလောက်ပါသည်။
EA ၏ configuration file ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်မှုအတွက် Bang EA ၏ Hedging EA ကို အသုံးပြုနေပါသည်။ EA ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဆက်မပြတ် ပြည့်စုံနေပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ EA လုပ်ဆောင်ချက် ရာနှင့်ချီရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့် ရာထူးများကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန် အလိုအလျောက် panel ၏အခြေအနေများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အများကြီးရှိပါတယ် […]
ဆုံးရှုံးသွားသော နည်းဗျူဟာများကို ပြောင်းပြန်ကူးယူခြင်းအတွက် မှာကြားမှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသလား။
ယခင် 10 နှစ် အတုယူ ကုန်သွယ်မှု ကာလအတွင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ကုန်သွယ်မှု မဟာဗျူဟာသည် တည်ငြိမ်သော ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်း၏ သတ်မှတ်ကုန်သွယ် ဗျူဟာအတိုင်း တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်ဈေးကွက်တွင် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေသည် အလွန်မြင့်မားပြီး ဆုံးရှုံးမှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာကို လိုက်နာပါက […]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2022
EA ကုန်သွယ်မှုသည် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများကို အလိုအလျောက် သိမ်းဆည်းသည်။
မှတ်ချက်- ဤဆောင်းပါးကို www.eabang.com မှ လွှဲပြောင်းထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် Mr.Tang မှ ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုကြည့်ရတာ မကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ဆောင်းပါးကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ EA သည် အမှာစာများဖွင့်ပြီး ပိတ်သောအခါတွင် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများကို အလိုအလျောက် မည်သို့ရိုက်နိုင်မည်နည်း။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် EA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထံမှ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ပရိုဂရမ်စနစ်ဖြင့် ငွေပေးငွေယူများကို အသုံးပြုသည်။ သူ့မှာ […]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2022
day bar နှင့် macrocycle အကြား ခြားနားချက်ကို မည်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်း။
အဓိကအားဖြင့် ကွဲပြားမှုသည် မတူညီသော fixedကာလများတွင် ဘားပုံသဏ္ဍာန်မှ လာပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း 1 မိနစ်ဇယားနှင့်နေ့စဉ်ဇယားကဲ့သို့၊ 1 မိနစ်ဇယားရှိ K လိုင်းများစွာတွင် TICK အရေအတွက်အနည်းငယ်သာရှိနိုင်သည်။ လူကြိုက်မများသောမျိုးကွဲအချို့၏ မလှုပ်ရှားနိုင်သောအချိန်ကာလအတွင်း၊ 1 မိနစ် K-line သည် အတက်အကျ […]
EA သည် အမှာစာများကို မပိတ်ပါက ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
1. အမှာစာ ဖြည့်သွင်းခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် အဖွင့်အကန့်ရှိ "ဝယ်ဖွင့်" သို့မဟုတ် "ရောင်းဖွင့်" ကို နှိပ်ပါ။ အမှာစာအသစ် မရှိပါက mt4 နှင့် mt5 အကောင့်ဝင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ၊ "Algo Trading" ရှိမရှိ နှင့် "DLL တင်သွင်းမှုကိုခွင့်ပြုပါ" ကိုဖွင့်ထားသည်။EA တပ်ဆင်မှု 2. အမှာစာအသစ်တစ်ခုရှိပါက၊ မပိတ်သောအမိန့်များကိုစီမံခန့်ခွဲမည်မဟုတ်ပါ၊ နေရာ […]
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2021
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်္ကေတများစွာအတွက် အသုံးပြုသည်။ အပိတ်အကန့်ရှိ အလုံးစုံ T/P ကို ​​အစပျိုးပြီးနောက်၊ ၎င်း၏အမြတ်ငွေပမာဏသည် အမှာစာအများဆုံးအတွက် ဤ EA မှ စီမံခန့်ခွဲသည့်ဆုံးရှုံးမှုကို အကာအကွယ်ပေးကာ မည်မျှပိတ်နိုင်သည်၊ Pofit>0-အကာအရံအမှာစာနှစ်ခု၏အမြတ်သည်0ထက် ကြီးသည်။ အကောင့်ဆုံးရှုံးမှု>%:Floating loss/Banlence>5% ရှိရမည်။
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2စာမျက်နှာ3... စာမျက်နှာ 19
Hedging EA v3.8.8.4 ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ဖော်ပြချက်
သင်္ကေတအများအပြားပါရာမီတာများ၊ ၎င်းသည်5လကြာလည်ပတ်ခဲ့ပြီးအမြတ်ငွေ 50 ဖြစ်သည်။
Hedging EA v3.8.8.3 ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ဖော်ပြချက်
အပိတ်အကန့်အတွက် အလုံးစုံ S/P ဆက်တင်
Backtesting သည် အလွန်နှေးကွေးသည်။
© 2022 BangEa WordPress နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ColibriWP အပြင်အဆင် .